“Wisdom Hill ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများ မဖြန့်ကြရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ပန်ကြား” – ရှအေလငျး
“Wisdom Hill ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကောလာဟလများ မဖြန့်ကြရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ပန်ကြား”
Wisdom Hill ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သက်ငယ်မုဒိန်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူများ အထင်အမြင်လွဲမှားစေမည့် သတင်းများ ဖြန့်ဝေခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက ခုလိုရေးသားထားပါတယ်…..
ဇူလိုင်လ(၂)ရက်နေ့တွင် အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ နေပြည်တော် WH ကျောင်း သက်ငယ်မုဒိန်း အမှုတရားခံ ဟု ယူဆရသူများကို. ဖမ်းဆီး လွဲပြောင်း ပေးလ်ုက်ပြီ ဟူရ်ျ လူမှုကွန်ယက် တွင်ဖော်ပြရ်ျ၎င်း.. ယနေ့ဇူလိုင်လ(၃) ရက်နေ့ နံနက်တွင် ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်း မိုင်တိုင်(၇၁) အနီးတွင် မိုင်းကွဲသည်/မိုင်းဗုံး တွေ့ ရှိသည် ဟူရ်ျ. ကောလဟလ သတင်းများ ထုတ်လွင့်ရ်ျ ၄င်း ..ပြည်သူများ ကို သတင်းအမှား များ ထင်ယောင်ထင်လွဲ ဖြင့် စိတ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်
အမြန်လမ်းမကြီး တလျောက် စီမံခန့်ခွဲ ခွင့် ရနယ်မြေ အတွင်း ဖြစ်ပွားသည့် အရေးကြီး ဖြစ်စဉ်မှန်သတင်း များနှင့်ပါတ်သက်ရ်ျ. အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံး Page. မှ အချိန်တပြေးညီ ပြည်သူများထံ အသိပေးဖော်ပြလျက်ရှိပါသည်
သို့ ဖြစ်ပါရ်ျ ပြည်သူအများစိတ်ဝင်တစား ထောက်ခံယုံကြည် မှု မြင့်မားသည့်. အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ အမည် ကို အလွဲသုံးစား ပြုရ်ျ ပြည်သူများထံ သတင်းအမှားများ ကောလဟလ သတင်းများ လုပ်ကြံဖန်တီး ဖြန့် ဝေခြင်း မပြုလုပ်ကြပါရန် သတင်း မီဒီယာ အဖွဲ့အချို့ နှင့် လူမှုကွန်ယက် Page အချို့ ကို တားမြစ်ပန်ကြားပါသည်
Ref: အမြန်လမ်းမကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး
Wisdom Hill ကိုယျပိုငျကြောငျးတှငျဖွဈပှားခဲ့သညျ့ သကျငယျမုဒိနျးမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပွညျသူမြား အထငျအမွငျလှဲမှားစမေညျ့ သတငျးမြား ဖွနျ့ဝခွေငျးမြား မပွုလုပျရနျ အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံးက ခုလိုရေးသားထားပါတယျ…..
ဇူလိုငျလ(၂)ရကျနတှေ့ငျ အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့မှ နပွေညျတျော WH ကြောငျး သကျငယျမုဒိနျး အမှုတရားခံ ဟု ယူဆရသူမြားကို. ဖမျးဆီး လှဲပွောငျး ပေးလျုကျပွီ ဟူရျြ လူမှုကှနျယကျ တှငျဖျောပွရျြ၎င်းငျး.. ယနေ့ ဇူလိုငျလ(၃) ရကျနေ့ နံနကျတှငျ ရနျကုနျ-နပွေညျတျော အမွနျလမျး မိုငျတိုငျ(၇၁) အနီးတှငျ မိုငျးကှဲသညျ/မိုငျးဗုံး တှရှေိ့သညျ ဟူရျြ. ကောလဟလ သတငျးမြား ထုတျလှငျ့ရျြ ၎င်းငျး ..ပွညျသူမြား ကို သတငျးအမှား မြား ထငျယောငျထငျလှဲ ဖွငျ့ စိတျ အနှောငျ့အယှကျဖွဈစခေဲ့ပါသညျ
အမွနျလမျးမကွီး တလြောကျ စီမံခနျ့ခှဲ ခှငျ့ ရနယျမွေ အတှငျး ဖွဈပှားသညျ့ အရေးကွီး ဖွဈစဉျမှနျသတငျး မြားနှငျ့ပါတျသကျရျြ. အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့ မှူးရုံး Page. မှ အခြိနျတပွေးညီ ပွညျသူမြားထံ အသိပေးဖျောပွလကျြရှိပါသညျ
သို့ဖွဈပါရျြ ပွညျသူအမြားစိတျဝငျတစား ထောကျခံယုံကွညျ မှု မွငျ့မားသညျ့. အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့ အမညျ ကို အလှဲသုံးစား ပွုရျြ ပွညျသူမြားထံ သတငျးအမှားမြား ကောလဟလ သတငျးမြား လုပျကွံဖနျတီး ဖွနျ့ဝခွေငျး မပွုလုပျကွပါရနျ သတငျး မီဒီယာ အဖှဲ့ အခြို့နှငျ့ လူမှုကှနျယကျ Page အခြို့ကို တားမွဈပနျကွားပါသညျ
Ref: အမွနျလမျးမကွီး ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး
သြဂုတ်လမှာပြည့်မယ့် ဖွေးဖွေးရဲ့အသက်ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ဆွံ့အသွားခဲ့ရ 😱😱😱
မွေးရာပါ နှလုံးအပေါက်ပါတဲ့ အံ့မင်းညိုရဲ့သမီးလေးအတွက် ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ...